“Mesut Ozil Waa JAAHIL Aan Caqli Lahayn” – Masuul Sare Oo Jarmal Ah Oo Weerar Xun Ku Qaaday Xiddiga Muslimka Ah – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeWararka Maanta“Mesut Ozil Waa JAAHIL Aan Caqli Lahayn” – Masuul Sare Oo Jarmal Ah Oo Weerar Xun Ku Qaaday Xiddiga Muslimka Ah
“Mesut Ozil Waa JAAHIL Aan Caqli Lahayn” – Masuul Sare Oo Jarmal Ah Oo Weerar Xun Ku Qaaday Xiddiga Muslimka Ah
Waxa cirka isku sii shareeraya khilaafka ka dhashay kulankii dhowaanta dhexmaray madaxweynaha waddanka Turkey, Racep Tayyib Erdogan iyo laba ciyaartoy oo ka tirsan xulka qaranka Jarmalka wakhti ay ku sugnaayeen waddanka Ingiriiska.
Toddobaadyo ka hor, laacibiinta khadka dhexe ee kooxaha Arsenal iyo Manchester City ee Mesut Ozil iyo Ilkay Gundogan ayaa magaalada London kula kulmay madaxweynaha waddanka Turkiga, Erdogan, waxaanay baraha bulshada ku baahiyeen sawirro ay la galeen iyo faallo kooban oo ay raaciyeen, gaar ahaan Gundogan oo ku tilmaamay madaxweynihiisa.
Arrintan ayaa waxa ka dhalatay canaan iyo cambaarayn ba’an oo masuuliyiin Jarmal ah iyo shacabka dalkaasiba u jeediyeen labadan ciyaartoy, kuwaas oo kulamo saaxiibtinimo oo toddobaadkii hore ay xulka dalkaas u ciyaareen lagu ooriyey iyagagoo garoonka ku jira.
Tababaraha xulka qaranka Jarmalka Joachim Low ayaa toddobaadkan dalbaday in la xidho sheekada kulanka xiddigihiisa iyo madaxweynaha Turkiga, hase yeeshee, waxa taas beddelkeeda soo dhacday eedayn cusub oo ka timid masuul sare oo ka tirsan xidhiidhka kubadda cagta Germany.
Oliver Bierhoff oo xil sare ka haya xidhiidhka, shaqo tababarenimo oo maldahanna ka haya xulka qaranka Jaramlka, ayaa Salaasadii waraysi kooban oo uu siiyey wargeyska caanka ah ee Sport Bild, waxa uu weerar qaawan ku qaaday xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Arsenal ee Mesut Ozil, kaas oo uu ku tilmaamay doqon aan fikirin oo jaahil ah.
Bierhoff waxa uu sheegay in aanu ka filaynin Ozil inuu kulan la yeesho madaxweyne Erdogan, haddii ay dhacdayna ay ahayd inuu iska aamuso oo aanu ka hadal.
“Waxay ahayd inuu iska aamusnaado, waxaanan kasoo qaadayaa inuu taas ku dhegsan yahay. Inuu ficilkiisa ku saxan yahay iyo in kale waa arrin kale, laakiin waxaynu aragnay cawaaqibkeeda isaguna wuu ogyahay khibraddii laga dhaxlay.” Sidaas ayuu yidhi Oliver Bierhoff.
Oliver Bierhoff oo ahaan jiray ciyaartoy caan ah oo ka tirsan xulka Jarmalka, waxa uu carrabka ku adkeeyey inay khalad ahayd in Ozil uu la kulmo madaxweynaha Turkiga iyadoo uu soo dhowyahay Koobka Adduunku, waxaanu yidhi: “Khalad ayuu sameeyey, laakiin marka waxaas oo dhan laga yimaaddo, waxa aanu ku xisaabtamaynaa waa dareenka ka dhashay. Ozil maaha qof xun, maaha nin siyaasad riixayso, laakiin waa jaahil aan caqli lahayn.”
Bierhoff waxa kale oo uu tilmaamay in arrinta Ozil iyo Gundogan aanay wax saamayn ah ku yeelan doonin xulka qaranka Jarmalka, waxaanu yidhi: “Walaac badan igama hayo kooxda guud ahaan, laakiin waxa uu iga hayaa labada ciyaartoy, sababtoo ah, Jarmalku mar hore ayay in badan isku halleeyeen Mesut iyo Ilkay”
Si kastaba ha ahaatee, xiisaddan oo uu doonayey tababaraha xulka qaranku in la dejiyo, ayaa u muuqanaysa mid marba dib usoo bilaabmaysa.